‘Nokia 9’ को तस्वीर भयो लिक, यस्ता छन् विशेषताहरु ! | जनदिशा
‘Nokia 9’ को तस्वीर भयो लिक, यस्ता छन् विशेषताहरु !
एजेन्सी, २४ भदौ । कुनै समय विश्व बजारमा छाएको माबाईल कम्पनी ‘नोकिया’ले पछिल्लो समयमा खासै चर्चा पाउन सकेको छैन । नोकियाले आफुलाई बजार पुनः स्थापित गर्न विभिन्न मोडलका मोबाइल सेटहरु बजारमा ल्याइरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा ‘नोकिया ९’ (Nokia 9) को तस्वीर सोसल मिडियामा लिक भएको छ, जहाँ यस स्मार्ट फोनको ५ रियरको क्यामेरा छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार (Nokia 9) मा पेन्टा रियर क्यामेराको सेट हुनेछ । यसका साथै लिड फ्लाश, इफ्रारेड रेडिशन र फोकसिङ फिचरहरु हुनेछन् ।
द नेक्स्ट वेबका रिपोर्टका अनुसार या मोबाइल सेटमा ५ रियर लेन्स अलग-अलग कामको लागि लगाईएको छ । यस लेन्समा टेलिफोटो, ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट, कलर र मल्टी लेन्स पिक्सल सिन्थेसिस समावेश गरिएका छन् ।
यस स्मार्टफोनको इन्टरनल कोडको नाम ( TA-1094 ) हो । जहाँ फूलको प्याटर्नमा पाँच् क्यामेराहरु समावेश छन् । प्राइमरी क्यामेराको बिचमा सेट गरिएको छ । प्राइमरी क्यामेराको चारैतर्फ सेकेण्डरी रियर क्यामेरा दिईएको छ । त्यस्तै फ्लास र फोकसिङ अपार्चर फिचर पनि दिइएको छ ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार (Nokia 9)को डिस्प्ले ६.०१ इन्चको हुनेछ । डिस्प्लेमा गोरिल्ला ग्लास ५ लाई समावेश गरिएको छ । प्रोसेसरको कुरा गर्नुपर्दा Qualcomm स्न्यापड्रागन 845 SoC पोसेसरलाई समावेश गरिएको छ ।
यस फोनमा ८ जिबि ¥याम र इन्टरनल मेमेरी २५६ जिबी रहेको छ । यो फोनको मुल्य हभने अहिलेसम्म जानकारी गराईएको छैन ।
Previous Previous post: मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
Next Next post: तीन दिने दिल्ली बसाइँपछि प्रचण्ड काठमाडौं फर्किदै